စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် တရုတ် 1000w အိတ်ဆောင် Photovoltaic ဆိုလာစနစ် ထုတ်လုပ်သူ - Zhechi Electric
1000w အိတ်ဆောင် Photovoltaic ဆိုလာစနစ် ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ရောင်းချသူများ လျှော့စျေး
1000w Portable Photovoltaic Solar System မိတ်ဆက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးတွင် photovoltaic ပါဝါထောက်ပံ့မှုစနစ်၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်ပေါင်းစပ်ထားသော လမ်းမီးအိမ်၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး IOT စောင့်ကြည့်စနစ်နှင့် နေရောင်ခြည်အလိုအလျောက် ခြေရာခံကိရိယာတို့ ပါဝင်သည်။ ဖြန့်ဝေထားသော စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် လုပ်ငန်းသုံးခေါင်မိုးများအတွက် တစ်နေရာတည်းတွင် ဖြေရှင်းချက်ပေးပါ။
1000w အိတ်ဆောင် Photovoltaic ဆိုလာစနစ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်
* MCU အသိဉာဏ်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာကြောင့် ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်။
* pure sine wave AC output ကြောင့် အသုံးပြုနိုင်သော ဝန်များ ကျယ်ပြန့်ခြင်း၊
* အဆင်ပြေပြီး လက်တွေ့ကျသော 5VDC-USB အထွက်ပေါက်နှင့် 12VDC အထွက်ပေါက်၊
* ဆိုလာခင်းကျင်းခြင်းနှင့် ဘက်ထရီ ဘုံ-အန်ဒိတ်စနစ် ထည့်သွင်းမှု။
* ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖွဲ့စည်းမှု (ရွေးချယ်နိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်) အတွက် mains supply ဖြင့် အားသွင်းပါ။
* ဘက်ထရီသက်တမ်း ပိုကြာအောင် အားပိုသွင်းခြင်း နှင့် overdischarge protection ၊
* စက်၏လည်ပတ်မှုအခြေအနေကိုမြင်ယောင်နိုင်ရန် ဒစ်ဂျစ်တယ်မီတာနှင့် LED များ။
* ယေဘုယျအားဖြင့် အလိုအလျောက် အကာအကွယ်နှင့် AC output overload protection၊ short circuit protection, etc.
1000w အိတ်ဆောင် Photovoltaic ဆိုလာစနစ်အတွက် အင်္ဂါရပ်များ
1. မီး၊ ရေဒီယို၊ DVD၊ TV အစုံ၊ ပန်ကာ၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ ကွန်ပျူတာ၊ လက်တူးအသေး၊ နှင့် အခြား အိမ်သုံးပစ္စည်းအတွက်။
2.Rate ပါဝါ 500w-3kw၊ Pure sine wave output;
3.MPPT ဆိုလာအားသွင်းကိရိယာ၊ 15A ဂရစ်အားသွင်းကိရိယာ
4. ပင်မထောက်ပံ့ရေးမုဒ်/စွမ်းအင်ချွေတာရေးမုဒ်/ဘက်ထရီမုဒ်ကို ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
5. အဆင်ပြေပြီး လက်တွေ့ကျသော 5VDC-USB အထွက်ပေါက်နှင့် 12VDC အထွက်ပေါက်၊
6. ဘက်ထရီသက်တမ်းပိုမိုကြာရှည်စေရန်အတွက် ပရိုတက်ကွန်အား အပိုအားသွင်းခြင်းနှင့် ပိုလျှံခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးခြင်း၊
7. အသိဉာဏ်ရှိသော အိတ်ဇောပန်ကာ ထိန်းချုပ်မှုဖြင့် ဘေးကင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊
8. ယေဘုယျအားဖြင့် အလိုအလျောက် အကာအကွယ်နှင့် AC output ဝန်ပိုအားကို အကာအကွယ်ပေးသော နှိုးစက်များ။ တိုတောင်းသော arcuit ကာကွယ်မှု။
hot Tags:: 1000w အိတ်ဆောင် Photovoltaic ဆိုလာစနစ်၊ တရုတ်၊ စျေးသက်သာသော၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့တွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်